PHINDA USEBENZISE IINGCEBISO ZOKUPHINDA USEBENZISE KWAKHONA IIPHEPHA LOKUMISA - LUNGELELANISA KWAYE UCOCE
Kutheni kufuneka ugcine iiPhepha oLisebenzisayo lokuSomisa
Ngelixa usenokucinga ukuba iishiti ezomileyo azisetyenziswanga ngaphaya kwegumbi lokuhlambela iimpahla, kukho inani elothusayo abanokuzisebenzisa ngalo ekhaya. Ngapha koko, zizithinteli ezimileyo ezimangalisayo, iipolishi ezigqwesileyo, kwaye zilungele ukukhuhla ubumdaka kude neefestile kunye neepani ezichithe usuku lude kakhulu esinkini.
Ukuba usebenzisa amashiti okomisa impahla ukuze ugcine iimpahla zakho zinuka kamnandi kwaye zingashukumi, musa ukuzilahla. Beka ibhasikidi kwigumbi lokuhlamba ukuze ubambe ii-dryer sheet zakho ezisetyenzisiweyo kwaye ufikelele kuzo ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo yasekhaya ibe lula (kwaye nokunye okuninzi ivumba elimnandi ). Funda ngeendlela ezilungileyo onokuthi usebenzise ngazo amaphepha emva kokuba bethathe umjikelo kumjikelo wakho wokomisa.
Sula enye phezu kweempahla zakho okanye ifanitshala ukunceda ukususa iinwele zasekhaya.
Qalisa phezu kweebhodi zakho ezisisiseko kunye nolunye udongwe ukuze uphakamise uthuli kwaye uncede ukuluphindisa.
Gcina iimfama zefestile zicocekile ixesha elide ngokuzisula ngephepha elomileyo lokususa uthuli kunye ne-lint.
Sula ifeni yesilingi ngeeshiti ezomisiweyo.
Susa umsizi kubanikazi bekhandlela ngesikhafu esikhanyayo kwiphepha lokomisa elisetyenzisiweyo.
Izinto ezimbini nakweyiphi na izihlangu ezinukayo ukunceda ukuzihlaziya.
Coca intsimbi enompu ngokurabha iphepha lokumisa elisetyenzisiweyo ngaphezulu.
Sula ngaphakathi ngaphakathi kwokomisa isitya sakho kunye netray yetayiti ngephepha elisomileyo ukuze uncede uthathe uthuli olunenkani kunye ne-lint.
Susa amanqaku amdaka kwiingubo ngokurabha kancinci ngephepha elomileyo.
Tuck iishiti ezomileyo ezimbalwa ezisetyenzisiweyo kwiidrawer zakho zokunxiba ngevumba elimnandi.
(Ityala lemifanekiso: Joe Lingeman)
Sula uthuli umabonwakude okanye isikrini sekhompyuter. Iipropathi zokumisa amashiti ezomileyo zinceda ukugxotha uthuli kunye ne-lint.
Freshen incwadi ye-musty ngokuyifaka kwi-baggie enkulu eplastikini kunye nephepha elisetyenzisiweyo okanye usonge isiqwenga okanye ezimbini ngaphakathi kwiphepha lencwadi uqobo.
Sula isikere esingenamthungo ngeshiti esomileyo esetyenzisiweyo ukuze uzilole kwaye ufumane ukusika okucocekileyo kwakhona.
Fakela iphepha elomileyo elisetyenzisiweyo elinamaconsi amanzi uze ulosule kwindawo yokuhlambela (itephu, iingcango zeshawari, njl. Njl.) Ukususa isepha kunye nentsalela.
Nceda ususe i-glitter nail polish ngokufaka i-dryer sheet kwi-nail polish remover.
Susa intloko yomnqwazi kunye neendlela zokubhabha ngokusebenzisa iphepha elomileyo elisetyenzisiweyo ezinweleni.
Khuhla amakhonkco endlu yangasese ngamashiti asetyenzisiweyo.
Iilensi zeglasi zamehlo zasePoland ezineshiti eyomileyo (sukuyisebenzisa kwiilensi zeplastiki).
Coca ukuchitheka okomileyo (njengomgubo ekhitshini okanye isarf egaraji) ngephepha elomileyo elisetyenzisiweyo. Amasuntswana amancinci aya kubambelela ngcono kwiphepha lokumisa elomileyo kunelirag okanye itawuli yephepha.
Manzisa iphepha lokumisa kwaye ulisebenzise ukucoca ukutya okuneenkani kwii-cookware.
Phosa iphepha elomileyo elisetyenzisiweyo epanini yokuntywila ekuncedeni ukukhulula ukutya okuphekiweyo.
Nceda ugcine inkunkuma ivumba lokulahla inkunkuma ngokujula amashiti asomileyo apho (kunokuba uthi, igumbi lokuhlambela igumbi).
Beka ishiti eyomileyo esetyenzisiweyo emazantsi eplanti okanye imbiza yokugcina umhlaba ungaphumi kumngxuma wokuhambisa amanzi.
Izinto ezisetyenzisiweyo zisebenzisa amaphepha owomileyo kwimigca yamaphepha yangasese ukuze isetyenziswe njengesiqalo somlilo sokukhempisha okanye ukubasa umlilo ngasemva.
Manzisa iphepha lokomisa elisetyenzisiweyo kwaye ulisebenzise ukukrwela iibugs ngaphambili kwemoto yakho.
Vuthulula ikhonsoli yemoto yakho kunye nedashboard enamashiti owomileyo asetyenzisiweyo.
Ityala: UJoe Lingeman
Ngabantwana abahlanu, uShifrah ufunda into okanye ezimbini malunga nendlela yokugcina indlu icwangciswe kakuhle kwaye icocekile kwaye inentliziyo enombulelo ngendlela eshiya ixesha elininzi kubantu ababaluleke kakhulu. UShifrah ukhulele eSan Francisco, kodwa uye waxabisa ubomi beedolophu ezincinci eTallahassee, eFlorida, ngoku ayibiza ngokuba likhaya. Sele ebhale ngokugqibeleleyo iminyaka engamashumi amabini kwaye uyayithanda indlela yokuphila, ukugcina imemori, ukwenza igadi, ukufunda, kunye nokuya elwandle kunye nomyeni wakhe kunye nabantwana.
Izinto ezi-7 onokuzithenga kwi-Costco-ngaphandle kobulungu
Mnyama, Mhlophe kwaye ayisiyiyo into edikayo: Iindlela ezili-13 ezintsha zokufumana uMnyama noMhlophe ngasekunene
Imigaqo emi-5 ekufuneka uyilandele ukuba ufuna ukuzama iNyanga yokungathengi, ngokweeNgcali zezeMali
inombolo 444 ethetha uthando
ukubaluleka kwe-3: 33
Ithetha ntoni i-7 11 ebhayibhileni
Ingelosi inombolo 1222 intsingiselo